Sakafo 5 Nenti-paharazana Avy Amin’ny Tany Miteny Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2014 2:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Català, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, русский, عربي, Italiano, Français
Midika ho fanaovana sakafo matsiro ny fotoanan'ny Karnivaly sy ny Talata Matavy maneran-tany. Mba hampilendalendana anao dia asehonay eto ireo sakafo mampiavaka ireo faritra mampiasa ny teny frantsay, mitondra aminm-pireharehana ny lova navelan'ny fikarakarana sakafo Frantsay. Mazotoa homana !
Cote d'Ivoire: Ny Alloco
Sakafo nentim-paharazana any Afrika Andrefana sy Afrika Afovoany ny Alloco. Vita amin'ny ‘plantains’ (karazana akondro) voaendy aminà mena-boanjo na menaka voanio, ary azo aroso ho toy ny sakafo antenantenam-potoana na ampiarahana amin'ny sakafo mahavoky izy. Loharano rahateo nipoiran'ireo toeram-pisakafoanana an-kalamanjana antsoin'ny Ivoariana hoe ‘allocodrome’ izay mivarotra sakafo Ivoariana toy ny attiéké sy ny poulet braisé (hena akoho atono) amin'ny vidiny mora ny alloco.
Alloco: akondro plantain voatetika manify sy voaendy (miaraka amin'ny trondro nendasina izy eto). Avy ao amin'ny Wikimedia Commons
Zarain'ny bilaogy “Recettes africaines” (Sakafo Afrikana) ny fikarakarana sakafo manokana miaraka amin'ny sakay ho an'ny alloco:
Totoy miaraka amin'ny tongolo gasy sy tongolo be ny sakay. Afaka mampiasa milina fitotoana na laona ianao.
Afangaroy miaraka amin'ny voatabia marihitra, antsasakà kioba fanaovana ro ( karazana jumbo) ary rano.
Hafanao kely ny menaka ary ataovy ao ilay sakay mifangaro. Ahandroy amin'ny afo malefaka mandritra ny 15 minitra. Farany, ampio sira sy dipoavatra hanome tsiro, ary ampio ranom-boasary makirana kely raha tianao.( Tiako izy amin’ izay !)
Arosoy amin'izay ny akondro misy sakay nendasinao. Azo aroso miaraka amin'ny attieké ihany koa io.
Louisiana (Etazonia): ny Jambalaya/Gumbo amin'ny orana (bibin-dranomasina)
Misy karazany marobe ny jambalaya, izay miova arakaraky ny hena sy ny fikarakarana ny vary izay maha-izy azy, samy feno masiatsiaka mandrakariva toy ny vary jambalaya Kreola foto-tsakafo any amin'ny fanjakan'i Lousiane, ao amin'ny tanànan'i Nouvelle-Orléans. Karazany mampiavaka azy ny gumbo amin'ny orana.
Gumbo amin'ny patsabe, avy amin'ny Wikimedia Commons
Inty misy fikarakarana ny gumbo amin'ny patsabe avy ao amin'ny tranonkalan-tsakafo Marmiton:
Sasao madio ny patsabe ary alao ny tsinainy, aza alàna ny lohany (izay manome tsiro).
Teteho madinika tokony ho 1 sm ny ‘okra’ ary ahandroy amin'ny ranon-tsira. (20mn).
Endaso ary haroharoy amin'ny menaka oliva kely ny patsabe miaraka amin'ny tongolo gasy sy ny tongolo be. Asio sira sy dipoavatra (10 mn)
Tantavano ilay gumbo efa masaka ary araraho ao amin'ilay patsabe (5 mn).
Arosoy amin'izao na ampiarahina amin'ny vary sy sakay.
Madagasikara: ny Ravitoto
Sakafo Malagasy nentim-paharazana ny ravitoto. Ravi-mangahazo tanora totoina amin'ny laona ary afangaro amin'ny tongolo sy henankisoa no zavatra ampiasaina aminy.
Omen'i Jenny M. ao Antananarivo voninahitra miaraka amin'ny fikarakarany azy manokana io sakafo Malagasy ‘tsy azo ihodivirana’ io:
#1: Andrahoy amin'ny rano kely ny henankisoa.
#2: Arotsahy ao anaty vilany lehibe misy menaka mafana ny tongolo be, tongolo gasy ary ny hena. Raha vao mendy ny hena dia arotsahy ny ravina voatoto (ravitoto), ny sakamalaho ary ny Kub'Or ( karazana Jumbo) miaraka amin'ny rano iray kaopy.
#3. Sarony sy avelao ho masak'evoka ambony afo malefaka mandritra ny 30 minitra, ary farany esory ny takotra ary avelao ho ritra tsikelikely (5 hatramin'ny 10 mn)
Ravitoto avy amin'ny Dodovanille
Maraoka: ny Tajine
Tsiro nentim-paharazana ny Tajine izay ny fangarony dia izay zavatra tian'ny sefo atao na izay misy eny an-tsena. Samy mahandro araka izay itiavany azy ny Maraokana tsirairay, fa ny tajine dia tsy ialàn'ny hena na trondro ahandroina miaraka amin'ny legioma na voankazo maina. Asehon'ny bilaogy “La Cuisine Marocaine ( Sakafo Maraokana )” ny fanaovana ny tajine-nà zanak'ondry miaraka amin'ny ‘truffle’ fotsy :
Raha ohatra ka ‘truffle’ lena no ampiasainao dia iangalio sy sasao madio tsara amin'ny rano mangatsiaka mba hialan'ny fasika.
Voasy ary apetraho moramora ao anaty tsatokaty lehibe. Teteho na avelao amin'izao arakaraky ny habeny. Avy eo ahandroy amin'ny ranon-tsira mangotraka mandritra ny 15 mn na mandra-palefany. Tantavano tsara avy eo .
Teteho madinika ny sorokà zanak'ondry. Voasy ny tongolo gasy ary teteho manify. Ahandroy ao anaty vilany misy menaka oliva aminà afo tsy dia mahery loatra mandra-pahamendiny ilay zanak'ondry. Afaka 5 minitra, ampio rano 40 sl, tongolo gasy, tamotamo, sira ary dipoavatra.
Sarony ary avelao hangotraka amin'ny afo malefaka mandritra ny adiny iray. Arotsahy 10 mn alohan'ny fahamasahany ny ‘truffle’.
Tajine, avy amin'ny Wikimedia Commons
Frantsa: Coq au vin
Sakafo nentim-paharazana mahazatra ny Frantsay ny Akoholahy amin'ny divay na ‘rooster’. Tantarain'i Oenologie perwez ny tantaran'io sakafo io :
Nataon'ny Romana fahirano ny foko Arverniana. Mba hanesoana ny Romana dia nomen'ny lehibeny ho an'ny Romana ny akoholahy iray, mahia mpiady sy mahery setra ho vavolombelon'ny tsy fihemoran'ny ‘Gaulois’ na dia teo aza ireo sakana. Nandritra ny fotoam-piatoana kely dia nasain'ny jeneraly Romana (Jules César) hisakafo ny lehiben'ny Arverniana, akoho matsiro milona ao anaty saosy mena no sakafo. Nazoto homana ary nanontany an'i César ilay Gaulois hoe inona io. Dia novalian'i César hoe ilay akoholahiny, nalona divay sy nahandroina miadana io….
Akoholahy amin'ny divay, avy amin'ny Wikimedia Commons